Fireside: Mfe Podcast weebụsaịtị, Bochum, na Nchịkọta | Martech Zone
Fireside: Mfe Podcast weebụsaịtị, Bochum, na Nchịkọta
Anyị na-ewepụta pọdkastị mpaghara edere na nke anyị Podcast Studio Indianapolis mana anyị achọghị ịgafe nsogbu nke iwulite saịtị, ịnweta ndị ọbịa pọdkastị, wee mejuputa usoro ntanetịime Podcast.
Otu uzo ozo gha abia ebe obula SoundCloud, ma anyị nwere ntakịrị obi ebe ọ bụ na ha rutere imechi - o doro anya na ha ga-agbanwe ụdị ego ha na-enweta ma ejighi m n'aka ihe nke ahụ pụtara maka onye ọ bụla na-anabata pọdkastị ebe ahụ.
Mgbe emechara nyocha ole na ole na ntanetị, anyị hụrụ Fireside, ngụkọta ngwọta maka pọdkastị. Ricnye ọnụahịa dị $ 19 kwa ọnwa ma gụnye atụmatụ ndị a:
Budata stats na nchịkọta - ezi, ezigbo oge nbudata stats na nchịkọta. Ha stats engine na nchịkọta na-akuko bụ na isi nke ngwaahịa, na-eme ka n'aka na ọ bụla pụrụ iche download na-esoro na gua n'ụzọ ziri ezi.
Dị Ọcha Ahụmahụ - emebere Fireside ngwa ngwa ka ọ dị ọsịsọ, dị mfe iji, ma kwadobe ya maka usoro ọrụ pọdkastị. Nke a na - enye gị ohere itinye uche n’ike gị ebe ọ bara uru - n’ịmepụta ọdịnaya dị ịtụnanya kama ịrụ ọrụ dị egwu dị ka ịgbakwunye metadata, iji aka gị na-ejikwa ihe nbudata, ma ọ bụ ichegbu onwe gị banyere njikọta ihe ngosi.
Akwukwo Oru - chịkwaa akụkụ ọ bụla nke nkọwa pọdkastị gị, gụnyere nka mkpuchi, metadata, akara ngosi isi, visibiliti na ndị ọzọ. Hazie ihe ngosi ngosi gị na njikọta na ịdọrọ na dobe, ma mepụta peeji nke omenala na redirects. I nwekwara ike ịkekọrịta ọnụ ọgụgụ gị na ndị na-akwado gị site na iji peeji nzuzo nzuzo pụrụ iche emere maka ebumnuche a.
Podcast RSS - mepụta ndepụta RSS zuru oke, iTunes-dakọtara maka ntinye dị mfe na Apple Podcasts (na ebe ọ bụla ọzọ). Nwere ike ịtọ ngosipụta ga - ebipụta n’ọdịnihu na akpaghị aka, ọbụlagodi mgbe ị na - anọghị na kọmputa na ngwaọrụ gị.
Mbubata Podcast - site na ụlọ ọrụ gị dị na Fireside na otu nzọụkwụ, na enweghị ọnụ ahịa ọzọ. A ga - ebubata aha, nkọwa, ndetu, yana kwa faịlụ MP3 dị ka ọhụụ ọhụụ na Podcast na Podcast na-akpaghị aka. Agaghị emetụta Podcast gị gara aga ruo mgbe (na belụsọ na) ị ghazigharị ndepụta ochie gị na ndepụta RSS RSS Podcast ọhụrụ gị.
Ngalaba omenala - can nwere ike iji ngalaba nke aka gị jiri Fireside mee ihe, naanị site na itinye aha ngalaba gị na dashboard na imelite ntọala DNS gị. Ihe omume a, jikọtara ya na njikọ ọdịnala na ibe ya na-eme ka ọ dị mfe ịkwaga pọdkastị gị, blog, na weebụsaịtị gị na Fireside.
Weebụsaịtị na Blog - Ezubere Fireside ka ọ bụrụ nghazi ngwakọ Podcast zuru oke, nke ahụ gụnyekwara ọgaranya, na-anabata ozi webụsaịtị ka ndị na-ege gị ntị wee mụtakwuo maka ngosi gị. Enwere ndị ọbịa na ibe ndị ọbịa na ntanetịime RSS nke aka ha, peeji mkpado (yana ntanetị RSS nke aka ha), peeji nke ọdịnala na njikọ, injin ịde blọgụ zuru ezu, ihe osise a na-ahụkarị na isi ihe eji eme ihe na weebụsaịtị na ibe ọ bụla, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. .
Omenala Player maka Embed - Kekọrịta akụkọ gị na ibe weebụ ọ bụla ma ọ bụ ngwa mbipụta akwụkwọ, site na Squarespace ka WordPress, na-eji ọkpụkpọ anyị nwere ike itinye.
Bookmarklet - Jikwaa mmemme njikọ ma gosi ihe edeturu na ha bookmarklet ha kemfe. Tinye ibe edokwubara na ogwe ibe edokọbara ihe nchọgharị gị, na oge ọ bụla ịchọrọ ihu akwụkwọ ịchọrọ ijikọ na ndetu ngosi, pịa naanị ibe edokọbara. Nwere ike ịkọwapụta ederede na ibe weebụ, a ga-agbakwunye ya dịka nkọwa maka njikọ ọ bụla.
Tags: oku okukuoku Podcastmkpokọta weebụsaịtịpọdkastịPodcast na ebe nrụọrụ weebụPodcasting
6zọ Mkpọchi ụzọ isii iji E-Azụmaahịa Gị Gaa Global